प्रवास Archives - तामाचुली खबर
काठमाडौँ, १३ साउन । भारतबाहेक अन्य मुलुकमा आपतमा परेका झन्डै ३५ हजार नेपालीको उद्धार गरिएको छ । साउन १० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ३५ हजार नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको जनाइएको छ । त्यसैगरी विदेशमा निधन भएका २२१ भन्दा बढी नेपालीको शव ल्याएर आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकार, कूटनीतिक निकाय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पहलमा विभिन्न २३ मुलुकमा अलपत्र परेका, भिसाको समय सकिएका, आफन्त भेटघाटमा
Tamachuli khabar June 19, 2020 0
काठमाडौँ ।लक डाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान ब’न्द भएपछि आज कतारबाट एकैदिन २० वटा श’व नेपाल ल्याइएको छ । कतार एयरवेजको चार्टर्ड जहाजले २० जना नेपाली नागरिकहरुको श’व र कतारमा अ’लपत्र परेका ४३ जना नेपालीलाई ल्याएको हो ।शुक्रबार नै कुबेतको ज’जिरा एयरले पनि २ वटा श’व ल्याएको छ । यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरबबाट एउटा श’व ल्याएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु ब’न्द भएका कारण यसअघि श’व ल्याउन
मुगु छायानाथ नगरपालिकामा स्वबियु सभापती चन्द्रप्रकाश माथी झुटो आरोप (बिज्ञंप्ति सहित )
Tamachuli khabar June 18, 2020 0
मुगु – छायानाथ रारा नगरपालिका भित्र सुशासन पारादशिर्ता र स्थानीय सरकारमा जनताको पहुच स्थापना गर्नाको लागि तपशिलमा उल्लेखी बिषयमा रारा शिक्षा क्याम्पसका स्ववियु सभापति अखिल संगठनका जी.क.स.क. चन्द्रप्रकाश मल्ल रबिन्द्र मल्ल लगायतका अन्य युवा छायानाथ रारा नगरपालिका को कार्यालयमा छलफल र बहस गरेको बिषयलाई विषयान्तर गरि कार्यालय तोडफोड र कुटपिट गरियको भनि झुट्टा कपोकल्पित र राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी नगरप्रमुख र नगरपालिकाको स्थानीय तह कर्मचारी संघबाट जारि भएको मिति २०७७/०२/३० को प्रेस
नेपालसेवा समाज केन्द्रिय समिति राजकोट को नेतृत्वमा पिडितहरुलाई राहत वितरण
Tamachuli khabar May 8, 2020 0
भारत राजकोटमा रहेका अलपत्र विभिन्न गरिब , दुखी अनि पिडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ ।श्री पनाह फाउन्डेसन अम्दाबाद र श्री नेपाली सेवा समाज केन्द्रिय समिति राजकोट को नेतृत्वमा पिडितहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रम सफल पारिएको हो । भेडियो हेर्नुहोस यो संगठन निक्कै नै सक्रिय बन्दै आएको छ । भारतका विभिन्न ठाउँहरुमा भएका पिडाहरुलाई निर्क्योल गर्दै आवश्यक मात्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । संगठनमा धेरै नै मनका धनीहरुको उपस्थिति भएको कारणले गर्दा
Tamachuli khabar May 3, 2020 0
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपालीको संख्या ७३ पुगेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्यांकानुसार बेलायतको ग्रेटर लण्डनमा २७, मिडल्याण्डमा आठ, साउथ इष्टमा ११ र साउथ बेष्टमा ती गरी ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ पुगेको छ । तीमध्ये मध्य न्युयोर्कमा १२, कोलोराडोमा दुई र भर्जिनियामा
Tamachuli khabar April 10, 2020 0
लन्डन , को’रोना भाइरसका कारण बेलायतमा एक नेपालीको ज्यान गएको छ। पुर्ख्यौली घर बाग्लुङ भएका नातिको विवाहका लागि बेलायत आएका कर्णबहादुर केसीको कोरोना भाइरसको कारण मृ’त्यु भएको पुष्टि भएको हो ।उनी मार्चको पहिलो साता लण्डनमा भएको नातिको विवाहमा भाग लिन उनी श्रीमतीसहित बेलायत आएका थिए । बेलायत बस्दाबस्दै खानाको स्वाद थाहा पाउन छोडेपछि र पखाला चल्न थालेपछि उनलाई लण्डनको न’र्थविक पार्क हस्पिटलमा भ’र्ना गरिएको थियो ।१० दिनसम्म आइसियुमा राख्दा पनि
खुसीको खबर !अस्ट्रेलियामा रहेका कोरोना संक्रमित सबै नेपालीको रिपोर्ट नेगेटिभ
काठमाडौं, २८ चैत । अस्ट्रेलियामा कोभिड १९ संक्रमित सबै नेपालीहरुको अन्तिम रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । अस्ट्रेलियाको क्यान्बेरास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका कोरोना संक्रमित सात जना नेपालीहरुको अन्तिम रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । दुई साता अगाडि अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा ३ जना र सिड्नीमा चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । अहिले उनीहरु निको भएर पनि आफ्नो दैनिकीमा फर्किइसकेका दूतावासले जनाएको छ । यस अगाडि पनि तम्मानियामा एक नेपाली
विदेशी नागरिकको भिसा तीन महिना थप्ने दक्षिण कोरियाको निर्णय
काठमाडौं – दक्षिण कोरिया सरकारले भिसा अवधि समाप्त भएका र हुन लागेका विदेशी नागरिकको भिसा पुनः तीन महिना थप गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस समस्याका कारण स्वदेश फर्किन असम्भव भएका विदेशी नागरिकलाई लक्षित गरी भिसा थप्ने निर्णय गरेको कोरियाको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट कोरियामा रहेर भिसा अवधि समाप्त भएका र हुन लागेका नेपालीले पनि भिसा अवधि बढाउन सक्नेछन् । आगामी मे अन्त्यसम्म कोरियामा कार्यरत ६० हजार विदेशी
भारतको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाटै दुर्व्यवहार
Tamachuli khabar April 3, 2020 0
काठमाडौं । कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएको वनवसा नाकामा १ सय १५ जना नेपाली क्‍वारेन्टाइनमा छन्। भारतको वनवसामा रहेको आम बगैंचानजिकको शारदा इन्टर कलेजको एकै कोठामा ३० जनाका दरले उनीहरूलाई राखिएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको क्‍वारेन्टाइन निर्दे्शिकामा हरेकको दूरी कम्तीमा डेढ मिटर तोकिएको छ। भारतका सीमावर्ती सहरमा बसेका नेपाली एकै कोठामा खाँदाखाँद बसेका छन्। उत्तराखण्ड राज्यका विभिन्न ठाउँमा काममा रहेका उनीहरू भारतमा लकडाउनपछि पैदलै सीमा नाकासम्म आएका थिए। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११
कृष्ण ढुङ्गाना, हाल मलेसिया ।अहिले म मलेसियामा छु । कोरोनाको त्रास नहुँदा त काहालीलाग्दो यो परदेशमा झन् कोरोना थपिएको छ । डरको के कुरा गर्नु ? भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ, कोरोना नपुगेको सहर नै छैन ।मनमा कोरोनाको डर बोकेर काम गर्नुपर्दा त जिन्दगीकै भर छैन, के दुःख गर्नु झैं लाग्ने । संसारभर फैलिएको कोरोनाको तथ्याँक हेर्छु अनि नेपाली धेरै भएको देशको हेर्छु । सबैभन्दा धेरै त मलेसियामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या